Fadin-tseranan'i Japon | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | kolontsaina, Japana
Japana Io no toerana tiako indrindra, azoko lazaina fa ny toerako eto amin'izao tontolo izao ao ambadiky ny firenena nahaterahako. Tiako loatra i Japon ka nanao vakansy aho nandritra ny telo taona lasa. Ny fitsangatsanganana matetika dia namela ahy hifandray bebe kokoa amin'ny olony, hahazo namana, hahita toerana sarotra ho an'ny mpizahatany na hiala sasatra tsotra izao ary hankafy ny fotoanako any. Ary mazava ho azy, izany dia nahafahako nahafantatra bebe kokoa ny fanaon'izy ireo.
Tontolo iray ny kolontsaina tsirairay ary ny marina dia misy maro fombafomba japoney fa eo imason'ny Tandrefana iray dia fampiasa farafaharatsiny. Mieritreritra ny hanao dia any amin'ny tanin'ny masoandro miposaka ianao? Tianao ve ny manga sy ny anime ary efa nitia an'ity firenena ity sy ny mponina ao aminy ianao? Avy eo ity lahatsoratra ity dia ho anao:
Fomba amam-panao Japoney
Tsy misy dikany ny fiarahamonina Japoney. Raha avy any amin'ny faritra misy antsika dia mifankahalala haingana isika, dia mifandray ara-batana kokoa, mianjera any an-tranon'ny namana tsy miverina be ary io karazana zavatra io dia tena hafa ny Japoney ary tsy hadino mora foana ny ambaratongam-piarahamonina.
Ny fiteny japoney dia manana kinova fahalalam-pomba marobe ary izy ireo, indrindra ny conjugations verbe, dia ampiasaina rehefa manana toerana ambony noho ny antsika ny mpiresaka, dia antitra na tsy fantatra fotsiny. Amin'ny maha mpizahatany anao dia tsy misy adidy tokony hahalala izany rehetra izany fa ny fahalalanao, raha mijanona ela kokoa ianao, dia ankasitrahana. Somary henjana ny marika noho ny any amin'izao tontolo izao:
ny karatra fampahalalana momba ny tena manokana dia takalo amin'ny tanana roa foana.
ny boriborin'ny fisotroana dia omena iray isaky ny mpikambana ao amin'ny vondrona misotro.
amin'ny ankapobeny, ny olona ambony indrindra ao amin'ny vondrona dia mipetraka lavitra indrindra amin'ny fivoahana sy ireo manaraka akaiky azy. Raha vaovao ianao na tsy manana toerana lehibe dia mila mipetraka eo akaikin'ny varavarana ianao.
ny fisotroan'ny hafa kosa alefa alohan'ny anay foana.
ny paty dia voagejika tsy misy tantara an-tsehatra. Tabataba sy famafazana? Marina ny anao.
Voalaza fa kampai amin'ny fotoana itiavana azy.
Voalaza fa itadaikimasu miaraka tanana alohan'ny hisakafoanana. Karazana "fiankinan-doha amin'ny bon."
Voalaza fa gochiso samadeshita, rehefa avy nisakafo.
Amin'ny ankapobeny ny fahalalana ireo fomba amam-panao ireo dia afaka mivoaka misotro amin'ny Japoney ianao nefa tsy misy olana. Mazava ho azy, tsy maintsy zatra ny zava-misy ianao fa tena misotro be dia be, indrindra ny labiera ary mifoka sigara. Tsy misy fandrarana ny fifohana sigara ao anaty trano fisotroana na trano fisakafoanana ka amin'ny ankabeazany, ny toerana dia hanana faritra manokana ho an'ny mpifoka. Raha be indrindra, ao anaty bara kely na izakayas, araka ny fiantsoana azy ireo, dia tsy azo atao izany, koa raha tsy mpifoka ianao ... azonao atao ny mahazaka azy.
La fifandraisana senpai-kohai Fomban-drazana lalim-paka ihany koa eto, na dia hita ihany koa, ohatra, any Korea. Io ilay fifandraisan'ny olona antitra sy tanora kokoa fa ny fahasamihafana tsy voatery ho lalina, afaka roa taona ihany. Ny fahanterana dia zavatra sarobidy indrindra any Japon satria manamarika mazava tsara ny ambaratongam-pahefana ary efa fantatsika ny zavatra manandanja eto.
Mitranga izany any am-pianarana sy any am-piasana ary manamarika ny halehiben'ny andraikitra sahanin'ny olona iray na ny asa vita. Ny senpai dia maodely iray ho an'ny kohai ary na dia manana fiaviany antenantenany sy ara-tafika aza izy dia mbola zavatra tena hita eo amin'ny fiarahamonim-pirenena Japoney maoderina.
Ao anatin'io tsipika io dia azontsika ampidirina ny fahazarana miala tsiny. Eto ny olona dia tsy manome fanazavana firy fa miala tsiny aloha amin'ny tsipìka izay manana mari-pahaizana matanjaka hanamarihana ny halehiben'ny fifonanay. Malemy ve, terena, misy mahatsapa, mahamenatra? Misy ireo fialan-tsiny ary mety hiafara amin'ny fanomezana, ny antony nahatonga anao tara amin'ny asa na tsy nahavita asa iray, fa ny tokony hatao aloha dia ny miala tsiny.
Anisan'ireo fomba amam-panao ao an-trano ny mahazatra indrindra esory ny kiraronao mba tsy handoto ny tany. foana misy kapaotyna ho an'ny vahiny aza. Ary misy kapaoty misaraka ihany koa ho an'ny trano fandroana. Raha mankany amin'ny hotely ianao dia ho hitanao hatrany fa tsy mitovy ny tsiroaroa. Ary raha manofa trano ianao dia ho hitanao fa misy tsinontsinona hivoaka any amin'ny lavarangana, ohatra.
Fomba japoney tiako izao dia ny miantsena ao a kombini na fivarotana fivarotana (Family Mart, Lawson, 7eleven). Tsena kely miparitaka eraky ny firenena izy ireo, na aiza na aiza, misy ny misokatra mandritra ny alina manontolo, izay mivarotra kely ny zava-drehetra: sakafo efa vonona, gilasy, magazine, zava-pisotro, ba kiraro, karaoty, lobaka, hety, plug, charger ary mandrakizay sns. Mahafinaritra ry zareo. Raha mividy sakafo amin'izy ireo ianao, ohatra, aorian'ny enina tolakandro dia mihena ny vidiny.
Raha tsara vintana ianao amin'ny fanombohana resadresaka amin'ny olona japoney iray, indraindray dia tsy tia ady olona izy ireo fa raha ny tena izy dia satria maro amin'izy ireo no tsy mahay miteny anglisy ampy hiresahana na hahatsiaro ho menatra amin'ny fahasahiranan'izy ireo, dia ho hitanao izy ireo manao fihetsika tsy fantatrao. Ohatra, raha mandà zavatra iray, miampita ny sandrinao, manaova X eo alohanao. Ary raha manome ny OK ho an'ny zavatra iray izy ireo fa tsy ny ankihibenay mahazatra sy malaza dia manatevin-daharana ny ankihibe amin'ny index izy ireo, amin'ny fomba taloha.
Ho hitanao koa izany Tsy manana olana amin'ny fatoriana hatraiza hatraiza ny Japoneys, indrindra amin'ny fiaran-dalamby na metro. Matory izy ireo, miondrika, mametraka ny lohany eo an-tsorokao, ary mitohy ny fiainana. Sasatry ny miasa be izy ireo ary indraindray mipetraka lavitra ny asany ka miala minitra vitsy.
Y inona ny fomba amam-panao tokony tsy raharahanao any Japon? Mahaliana ... Mitsoka ny oronao imasom-bahoaka tsy dia hita tsara. Indraindray tsy azo ampiana izy io fa mariho fa tsy hahita olona maro hanao azy ianao. Tsy dia hita tsara koa io mihinana ary mandehana eny amin'ny arabe miaraka amin'izay. Mividy vatomamy aho ary mihinana azy mandritra ny diako, mividy Coca Cola aho ary misotro azy io eo am-piandrasana ny bus, fa any Japon dia tsy dia hita loatra ireo fanao ireo.
Heverina ho somary marokoroko izy ireo. Tsara ny gilasy, fa tsy sandwich. Raha mividy zavatra ao amin'ny magazay ianao dia mihinana azy any an-trano na manodidina ny fivarotana na amin'ny sehatra ahitanao fa misy olona misotro, misakafo ary mifoka. Tsy afaka manakaiky ny varavarana akory ianao! Izany no ilazako azy ireo satria nalain'izy ireo moramora tany ivelan'ny indray mandeha aho ...
Ary farany, Japon dia firenena iray izay tsy ilaozanao tendrony. Iray karama kely kokoa ho an'ny mpizahatany izay voaray tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » kolontsaina » Fomban-drazana Japon